Vaovao maro momba ny fanavaozana vaovao ny Clash of Clans | Androidsis
Ny Clash of Clans dia mahazo ligy vaovao, ozona vaovao ary bebe kokoa amin'ny fanavaozana lehibe iray
Clash of Clans dia azo antsoina hoe LoL amin'ny sokajy lalao paikady izay tokony hanorenantsika fotony, handroso trano ary hamoronana tafika hanafika mpilalao hafa amin'ny Internet. Fomba iray feno hipoka ao amin'ny Android ary zatra mandray ny tolo-kevitra vaovao avy amin'ny karazana studio lalao video miaraka am-pelatanana, toy ny nitranga tamin'ny Gameloft farany teo fantatra amin'ny fahirano.
Vao mainka manasarotra ny mpanohitra maro izay Mitsambikina ao anaty peratra izy ireo mba hanandrana hamely azy, Supercell dia namoaka fanavaozana lehibe ny Clash of Clans izay azontsika asongadina amin'ireo ligy vaovao miaraka amin'ny fifaninanana ligin'ny League of Legends. Ny zava-baovao hafa dia misy ozona maizina vaovao izay hankafizanao ny hatsarana rehefa ampiasainao eny amin'ny ady izy ireo ary hanome anao paikady hafa handresena ireo fahavalo matanjaka indrindra.
1 Hery vaovao, ligy ary kalokan'ny maizina maizina
2 Vaovao kely hafa
Hery vaovao, ligy ary kalokan'ny maizina maizina
Ny fampiharana ny kalesin'ny ody maizina dia midika fa afaka mahazo vaovao marobe isika ao amin'ny Clash of Clans. Famosaviana telo no azo noforonina ao anatin'ity vilany ity. Ny iray dia ny poizina izay hamorona rahona misy poizina izay miadana ary mampihena ny ain'ireo miaramila miaro ny fototra; ny ozona horohoron-tany izay saika hanimba ny rindrin'ny fahavalo sy ny tranony; ary ny farany amin'ireo telo, izay mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny hetsika ka tsy mandray akory ny antsasaky ny habaka izay matetika no anjakan'ny mahazatra.
Ireo ligy vaovao dia manompo manolora fahafinaretana bebe kokoa ary mba hahafahan'ny mpilalao efa manana ambaratonga avo manohy mankafy avy amin'ny Clash of Clans. Ny ligin'ny Titans sy ny angano dia roa amin'ireo fanovana ara-potoana indrindra, ary ity farany dia fanambin'ny mpilalao ambony ary mifarana isaky ny faran'ny volana.
Ireo mpilalao miditra hiditra sy handray ny loka tsara indrindra, dia hiseho ao amin'ny piraofilina sy ny latabatr'ireo mpilalao tsara indrindra avy amin'ny Clash of Clans.
ankehitriny Dragon level 5 dia mandalo amin'ny fahazoana azy rehefa manana ny ambaratonga fototra amin'ny folo isika. Ilay zava-baovao kely hafa dia tranobe "manohitra ny rivotra" faharoa hanampiana antsika hamafa ny habakabaky ny fahavalo amin'ny ambaratonga faha-9 an'ny toby.
Araka ny mahazatra dia mitranga amin'ireo fanavaozana lehibe ireo tonga ny fiovana andrasana handanjalanjana ny lalao. Azontsika atao ny manasongadina ny fihenan'ny fotoana fiofanana ao amin'ny ozin-tsipelina, ny fitehirizana ireo loharanom-pahalalana rehetra izay tsy voaro amin'ny famoahana ozona mivantana na amin'ny fomba hanomezan'ny mpilalao fifaninanana vatosoa bebe kokoa ho an'ny mpilalao maro isaka ny foko.
Ary tsy mijanona eto ilay zavatra, satria trano sasany efa nitombo ny habetsahan'ny fiainana, ka ho sarotra kokoa ny handrava azy ireo. Fampahalalana iray hafa manan-danja ho an'ny lalao multiplayer dia ny tilikambon'ny mpandefa zana-tsipìka izay handefa ny zana-tsipìkany amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa, ka tsy ho diso anjara loatra izy ireo.
Farany, ny bibikely mahazatra dia manamboatra sy ny fanatsarana interface hafa toa ny mety hampiofana ny tafikao manontolo amin'ny bokotra voatokana noho izany zavatra izany indrindra. Antsipiriany farany momba ny fiofanana miaraka amin'ny fomba fijery mamela anao hanafatra ny tafika, hanitsy ny tafika ary ho ody mihitsy aza, noho izany dia tsy handany fotoana be izahay hampiomanana azy ireo hanafika mpilalao hafa indray.
iray hafa fanavaozana lehibe ireo izay tena tianay ho an'ny Clash of Clans ary efa manana lisitra ao amin'ny Play Store ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny Clash of Clans dia mahazo ligy vaovao, ozona vaovao ary bebe kokoa amin'ny fanavaozana lehibe iray
Miaraka amin'ny ody maizina fahatelo ry zalahy!
Mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny hetsika fotsiny izany fa tsy ny hafainganam-pandeha.
Ny cadence dia mamela azy amin'ny antson ny adidy ary tsy mifangaro lalao.
Misaotra amin'ny fanamarihana! Manitsy azy aho izao. Tsy avy amin'ny Call of Duty aho: =)
diego sanchez dia hoy izy:
Fa maninona no tsy reko ny feon'ireo trano?
Valiny tamin'i Diego Sanchez
Ity no finday avo lenta an'ny Panasonic, ny Panasonic P55